Isi ọdịnala, Pan-Africanism & Democracy - Afrikhepri Fondation
Omenala ndị isi, Pan-Africanism & Democracy
Pa Tchebayou Abu
Na-agụ: 38 min
Manyị na-amalite na akụkọ banyere akụkọ ndụ. Nke a bụ akụkọ akụkọ na-akọwapụta usoro maka ịnyefe ikike na Fondjomekwet isi. Ọ bụrụ na-ekpughe ma ha ahụ n'agbanyeghị nnukwu ịdọ aka ná ntị ebe a, ọ karịrị m njikwa. Enweghị m obi abụọ ọ bụla na ndị ga-ahụ onwe ha ka ha kọchaa m, ga-enwe n'otu oge ahụ na-eche nganga zoro ezo nke ịbụ ndị na-akwado akụkọ akụkọ nwere ike ịbụ ihe atụ na ngosipụta (maka mmeri nke ụkpụrụ nke ochichi onye kwuo uche ya) nye ndi Kemites na ndi Pan-Afrika ndi ozo, dika odi m, choro ichota otu uzo nke ikike nke ala Afrika. Ọ bụrụ na ọkwa a nwere ike ịpụta, ọ bụ maka nnwere onwe na afọ ojuju na mba anyị. ebe ọ bụ na kọmputa na usoro iwu machibidoro ndị enyi anyị nọ na China na ụfọdụ mba Arab.
Afọ abụọ tupu ya anwụọ, m gara nna nna m, bụ Eze Ukwu nke Fondjomekwets. Ọ nabatara m ngwa ngwa n'igbe ya na họtel Hila dị na Douala. Ọ bụ ụtụtụ Friday. N'ịhụ ụwa echere m kpebiri na m ga-aga ihe ndị dị mkpa site na usoro ọma nke omume ọma nke enyere ndị eze: - Ohgiaha (ị maara m?) - Chisiele (nọdụ ala) ọ gwara m. Ka m wee ghara ịgwụ onye na-agụ ihe, ana m asụgharị okwu ndị ọzọ na French. - Eze mba ahụ, abịara m kelee gị maka ịzụlite nne m n'ọkwá Mbeuh po Fo ô. Enwere ike ịsụgharị okwu a site n'aka Activator nke Princes. - Dị ka nke ahụ? Ọ na-agwa m. - Eze m, ana m asọpụrụ gị nke ukwuu. M kwuru. Eze bụ eze niile, nke ndị hụrụ ya n'anya na ndị na-ahụghị ya n'anya. O kwuru. Amaara m na okwu "ịkele" ga-abụ nke dị ala ma ọ gaghị enye m onyinye a. Agara m: - Ekwenyesiri m ike na m nwere ike ịhụ n'anya nke ị nyere dị ka onyinye na mba. Ụzọ ị ga - ajụ maka afọ gị, ònye ga - abụ onye nọchiri gị? Ị na-eleghara agha ọchịchị anya maka ọbịbịa gị nke ndị isi gị na-anapụta? Onye isi ọ bụla hụrụ onwe ya ka ọ bụrụ eze. Site n'ịdị umeala n'obi ihe a na-ekwu masks ihe anyị na-ekwu. Ọ bụ ọrụ nke onye na-eme mkpesa iji wepụta ihe a ga-aza iji zaa ajụjụ ahụ. Site na nke a, nna m ochie bụ onye nduzi. O gwara m: - onye bụ eze obodo ahụ, ọ bụ onye na-agaghị achọ ọkwá n’ihi na ọ ga-abụrịrị eze. - Ya mere, ọ bụ akụkọ nke gangster, echere m. Anọghachitere m ihe ngosi ndị na-ewuli elu. Ndị isi na-enweghị isi nweelarị ụlọikpe ha, nke ndị isi na-ekwenye na ha bụ ndị na-enweghị ike ịlụ ọgụ maka eze, ihe ndị dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ dị anya site n'aka ndị ezinụlọ eze, na ọbụna site n'aka ụfọdụ ndị a ma ama. N'oge ngosipụta ahụ, m ga-atụ anya ka ndị mmadụ kwuo: “- anyị chọrọ onye si n'obodo nta ahụ. Okwu ndị a dara na ntị ndị isi ndị nne ha na-ahapụ obodo nta ahụ. Na mgba maka mmeri nke ike, enwere ọchịchọ nke nwata nwoke ọ bụla na-achọ oké ọchịchọ. Enwekwara umuaka umuaka na ezighi ezi site n'ulo oru eze site na omenala obodo. Onye ọ bụla na-eme ike ya ka nhọrọ ikpeazụ họrọ otu n'ime ụmụnne nne ya. Otu n'ime adaeze ahụ alaghị azụ iyi egwu Eze ahụ: "- onye ka ị na-ahapụrụ m? M meghere akpa m na Yaoundé ka ndị Ministers maka Rdpc. ". A ghaghị ịkọwa ya na ezinụlọ eze na-achị achị nwere eze, ndị nwunye ya na ụmụ ya. N'ụlọ eze, nne na ụmụ ya bụ ndị nne na nna. Ọ dị m ka agha a maka ike abụghị nanị okwu ọnụ. Otu n'ime ndị enyi m na nke a, naanị onye jikọtara ịma mma, ịgba aghara, omume, na ọnụnọ maka ọrụ a, nwụrụ na-egbu egbu. Enweela nnukwu agbụrụ dị n'otu ma bụrụ onye na-eme ka ọ bụrụ ihe ọ bụla na "toutou". A na-agafe ebe onye onye ụma maara ụma kama ọ na-ekwupụta nkwupụta ndị ọrụ na-amaghị. O meela nzuzu gwa eze "ị ga-enyerịrị m ebe ahụ" Ihe ndị a niile gafere ebe nchekwa m. Ekwuru m mgbe ahụ: Eze nke mba ahụ, ị ​​kwenyesiri ike na n'ịrụ ọrụ gị ị nyere ihe kachasị mma nke ị nwere ike ma ọ bụ, ị chere na nke kachasị mma ka ga-abịa maka Fondjomekwet? Iji jụọ ajụjụ a, ọ gwara m na m jụrụ ya banyere ndekọ ya. Ọ ji nwayọọ nwayọọ gbanwee isi ya site n'aka ekpe ruo n'aka nri wee jụọ otu isiokwu na-eguzo n'ebe ahụ iji duru m gaa n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma nye m ihe m chọrọ. Gini ka m'mere Eze ya ka o kwesiri ihu oma a? Enweghị m ike ikwu ya. Ka o sina dị, site n'ịmụmụ ọnụ ọchị, ndị isi abụọ soro m gaa na tebụl m. Anọ m n'ọnọdụ na-adịghị mma, omenala bụ na anyị abụghị ibu arọ nke Eze. N'ịbụ onye na-enweghị ụgwọ ọrụ, ana m agwa onwe m na ọ ka mma ịghara iri ihe ọ bụla ma ọ bụghị iji kpuchie onwe m na ịhụ ka eze na-akwụ ụgwọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ m. Anọ m na-eche banyere nke a mgbe m hụrụ ka enyi nwata na-abanye n'ime ụlọ ahụ. M na-aga n'ihu n'ihu ya ma kọwaara ya ọnọdụ ahụ n'enweghị nchegbu. Mgbe ahụ, ọ kpọrọ onye ahụ na-elekọta ya ka o wetara ya ụgwọ ahụ n'ime ụlọ ya. M wee laghachikwuru ndị enyi m abụọ n'oge ahụ na-enwe ùgwù dị elu. Na nhọrọ nke ọ bụla, okpokoro adịghị mma n'oge na-adịghị anya. Mkparịta ụka ahụ gara n'ihu. E wezụga nke ahụ, ndị isi m aghọtaghị mmekọrịta mụ na nna ha. M dị njikere iso eze kwurịta okwu. N'ihi ya, ikwurịta okwu na ha yiri ihe na-agwụ ike. Ya mere, azara m ya site na nkwupụta ụgha na echiche ha. Chọta? Nke a bụ ya. - O kwere omume ... Ebe ọ bụ na ha apụghị ịhụ na mụ na ha anọghị, m laghachiri ajụjụ ahụ nyere m nsogbu ndị a. Kedu ka m ga-esi akọwa na nna nna m, Eze nke bụ Mayor nke Banja ruo ihe karịrị afọ iri, enweghị ụzọ ọ ga-esi nweta ụlọ ya? N'oge akọrọ, ájá ruru 20 cm. Na mmiri ozuzo, ọ ka mma ịga ụkwụ karịa ụgbọ ala mgbe ihe onwunwe maka ụzọ a dị ọtụtụ na ugwu ndị gbara ya gburugburu. Usoro iji wuo nkume a kwadebere okporo ụzọ nwere ihe karịrị 20 000 afọ tupu oge anyị. Anọ m n'ụdị echiche ndị a mgbe eze batara n'ime ụlọ ahụ, mee ka m bịakwute ya wee sị: - Whonye bịara ime ihe na mba ahụ ma ajụrụ m? - Eze kachasị mma nke mba ahụ! M kwuru. - understood ghọtara! O kwuru ma si ebe a pụọ. Ọ bụ ụjọ na m zara ajụjụ ya. Site na onye ajụjụ m nọ na mmalite nke ajụjụ ọnụ ahụ, abụrụ m onye na-ajụ ajụjụ. Agwara m onwe m na ajụjụ ahụ mere ka m nwee ezumike n'ụlọ oriri na nkwari akụ na-eme ka ndị mmadụ mara banyere ya na nke ọ maara. O kpebiri ịmara ebe m nọ. Ọ chọrọ ịma ma ọ bụrụ na m bụ onye nnọchianya nke ndị iro ya ma ọ bụ onye na-achọsi ike ịmata ihe. Ihe oyiyi nke obodo a nke nwuru anwụrụ maka ịbịakwute obodo mmegide na-agafe isi m. Agwara m onwe m na ntụkwasị obi nke anụ ahụ m na nke uche dabeere na nkọwa nke azịza m nye ajụjụ ya. Ọzọkwa, m ga-azaghachi ma ọ bụghị? Na-ekweta na ọ bụla ọ ga-ekwe omume ọ bụla. N'oge na-adịghị anya, nna m ochie ga-emetụta akọnuche ya mgbe ezigbo oge ahụ ruru. Site na nke a echiche m bụ ajụjụ nke onwe ya. Ya mere, ọ bụghị ihe amamihe dị na ya ịchọta ụzọ dị mma iji gwa ya na ọ bụ ihe ziri ezi iji kwenye mmebi iwu ya site n'enye ndị isi ya nsogbu. Ma eze enweghi ike ileghara eziokwu ahụ anya na ọ nọ n'ihu onye na-anụ ọkụ n'obi; ọ bụ afọ 35 ka m gbalịrị ịhụ ya n'oge ọ bụla n'okpuru nsogbu nke ihe omume. Ma, azịza m nye ajụjụ ya gbara akaebe na enweghị m nsogbu. N'anya ndị a, ajụre m ịrụ ọrụ m dị ka onye iro na ịkpọte ya anụmanụ ya. N'okwu eze nke ịda ada, onye iro ahụ na-eti naanị ma ọ bụrụ na ọ kwadoro ọnọdụ ya. Eze a nke nwere nnukwu onwe ya onwe ya apụghị ịhapụ iwu a. Ya mere, enwere m akụkụ nke nsụpụ dị nsọ. M wee gbaba n'ime ya site n'ikwu na ọ bụ ezigbo mba ahụ. N'okwu ya, "ị ghọtara" pụtara "ị nwere onwe gị na nke ahụ dị mma maka gị. N'ihi ya, abụ m onye ụjọ. Ọ dị mkpa n'ihi na ngwa ngwa na oge ahụ na nkwari akụ a, bụ ịchọta ihe nzuzo ochie na-emesị nweta nkwụnye ụgwọ nke ụbọchị. Otú ọ dị, ọ gaghị ekwe omume tupu oge eruo. Mgbe nwanyị mara mma dọkpụpụ anyị, ọ bụ mgbe ụfọdụ ka anyị na-edo onwe anyị n'okpuru mmechuihu ka ukwuu.
Ọkwá ya bụ Kamga David, Eze nke fondjomekwets nwụrụ 4 December 2008. Emere ememe iji kwadoro onye a họpụtara ahọpụta na January 4 2009. Ekpebisiri m ike na agaghị m etinye aka na ndị ọ bụla ga-enyocha ya. Enwere m ihe ize ndụ nke ime ka ọ gbanwee echiche m nke eze dakwasịrị ya. Mgbe ahụ, m ga-eche na a kpaliri ya ịkasi ya obi mgbe ọ nwụsịrị ụgwọ ọrụ a. Mụ onwe m bụkwa onye na-eme ka okpueze a dị. Ma o mere ka m kwuo na ọ dịkarịa ala, ndị 475 nọ na mbụ enweghị ike ịrụ ọrụ a nke Eze. Ya mere, enweghị m ohere. Na Sunday na Fondjomekwet, m ga-abụ onye nkiri.
Mgbe ụfọdụ, ihe anyị na-agba agba ọsọ ga-amasị anyị. 9 ụbọchị tupu ụbọchị "j", esoro m ụmụnna m ndị nwoke na ndị nwanyị bụ ndị jeere òkè na ọrụ dị mkpa maka ihe omume ahụ. Ịga bistro na Bépanda Douala, okwu ndị a, "hey! Whoweoui (onye bu nke ahụ?) Abubakar, "ka a kwụrụ. M lere anya ma hụ otu onye isi na uwe nke ji ya mma. N'ihi ya, m tiri mkpu: - Miehou (ịdị ukwuu ya) olee otu ị mere? - Bata abanye oche! o kwuru. Ihe m mere. Ozugbo ahụ, o nyere iwu ka ha na-ejere m ezigbo mmanya. Ihe e mere. - Ọ bụ Eze na-enye gị, Eze nke fondjomekwets! O kwuru. Amaara m ihe mere anya ya ji enwu gbaa mgbe m kpọrọ ya "oke ya", n'agbanyeghị obere obere ya na nkwarụ ya. Ebee ka e nwere ike isi n'aka? Site n'ọnụ nna ya, obi abụọ adịghị ya. Nna nna ahụ nwere ike ikwu na ọ ga-enye ụmụ ya nwoke ọ bụla ohere ka ike. O nweghị onye nwere ike iche na ọ bụ iwu nchekwa. Nwunye ochie a n'anyasi, kwesiri izere ka ndi ikom ya na ochicho ojo ha na-eme onwe ha ka ha ghara igbu onwe ha ma obu bu igbu onwe ha n'ime mgbagwoju anya ha kwesiri itinye aka n'oche eze ahu. Ihe onwunwe ya nwere ike isi n'ọgbọ ya pụta. Ọzọkwa, mgbe Eze gwara m "- onye ahụ bụ Eze nke mba ahụ, ọ bụ onye na-agaghị achọ ọfụma n'ihi na ọ ga-abụrịrị Eze", naanị okwu ahụ bụ "ne agala achọ palaver ”. N'ịhụnanya dị ukwuu o nwere maka ụmụ ya, ọ na-enwupụta n'ocheeze ọ bụla ma kpọọ ka ọ dị jụụ. Ònye nwere ike ime ma ọ bụghị n'ọnọdụ a? Anaghị m ahụ na arụmụka a na-emeghe ọzọ. Otú ọ dị, dị ka ihe nchebe megide ya, udo dị n'ụlọ ikpe ya, na ike ya nwere uche, ọ nwere ike ime na Eze na-egbu ya site na ụzọ zoro ezo, na nke ụmụ ya nke akpịrị ịkpọ nkụ maka ike nwere ike iwetara ya iji merie nhọrọ nke nna ya. Nke a bụ ihe a pụrụ ikwu na ụfọdụ ụlọ eze, ọnwụ ụmụ nwoke tupu oge nke Eze ahụ. Anaghị m ekwu na nke a bụ ikpe na fondjomekwet. Ma m na-atụ aro na ọ ga-ekwe omume na ụfọdụ ndị a hụrụ n'ebe ndị ọzọ. Nke a bụ nnọọ ihe dị iche iche nke na-atụgharị ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme ga-agụ m ka ha ghara ịhapụ onwe ha n'elu egwuregwu mgbe ha ga-enyocha ihe omuma banyere ndị isi. N'ihi na ikike niile dị ize ndụ ọbụna n'ihi nke aka ya. Ma ike a bụ onye kwuo uche ma ọ bụ na ọ bụghị. Ma ugbu a, enwere m onye isi nke bụ Eze nke e doro nsọ. Ka m na-ele anya, ọchịchọ ịmata ihe mere m ihe. N'adịghị ka ụmụnne ndị nwoke na ndị nwanyị ahụ m hụworo, ọ bụ nanị ya na-enweghị àgwà ọdịdị nke nna ya. Mana n'ihi ihe ndị o ji n'aka, akụkụ a nke ihe enweghị nchebara echiche. Ebe ọ bụ na ọ kabeghị Eze, enwere m ike ịjụ ya ajụjụ ndị doro anya. Ọ bụghị n'ihi na dịka Eze, ọ gaghị anabata ajụjụ ndị na-agbanwe agbanwe, mana n'ihi na ọ bụrụ na otu n'ime ihe ndị ụlọikpe ya na-enyere ya aka n'ọrụ ya, na-eche na anyị enweghị Eze, anyị nwere ike ịnweta nkwupụta uche uche. Enwere m ekele maka okwu ya "uru maka obodo nta", "ihe maka obodo ahụ." Nye ya, ndị okenye na ndị bourgeoisie ga-arụ ọrụ ugbu a dị ka ndị na-eto eto nke obodo dị n'ofe ezinụlọ ha. . Ọzọkwa, enwere m obi eziokwu mgbe, na-ahapụ ya, m wee sị ya: - ịdị ukwuu ya, enwere m mpako ịmara na anyị nọ n'ụlọ ikpe. Kedu ọkwa ma ọ bụ nke ala anyị nọ n'isi, nke a pụtara ìhè nye m ma ọ bụghị ya. Otu asịrị na ụlọ eze na-ekwu na Eze bụ onye a ji akara akara n'aka ya. Ma n'ọnọdụ a, e nwere ọtụtụ ọnọdụ a. A pụghị ịghọgbu nna nna m. Ezigbo nwanyi nke ulo ikpe ya maara otua esi ebute ya ka o nwee ike imeputa ihe di otua banyere nwa ya a na-amughi nwa. Na onye na-enweghị ego zuru ezu nwere ike ịbịakwute ndị ọkachamara na-agwọ ọrịa. N'ịmara nna nna m maka na ọ na-abịakwute ya ọtụtụ ugboro, Ohere nke onye ngwụrọ a dị mma, nkwụsị aka ya na-enweghị ike imetụta nhọrọ Eze ahụ. M kwuolarịrị na m bụ onye kacha mma, onye nyocha 475th. M wee mee ka ọ bụrụ na m chetara ya, ma ọ bụrụ na m jiri ndị ọzọ na-aga ime, ọ ga-adịrị m ka m nwee ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-akpata ya, m wee were iwe na enweghị m akwụkwọ ndị ọzọ. Ọ gaghị ekwe omume n'ihi na ọ bụghị mmadụ nile nọ n'obodo ahụ. Enweghị m ike inye ya ọkwá. Achọrọ m ka ọ bụrụ Eze na-atọ ụtọ nke fondjomekwets. Ọ ka nọ ọdụ n'ihi na ọ chọrọ ịbanye obodo ahụ n'oge ọ bụla o kwere mee.
Na Sunday ahụ, abịara m na onyeisi obodo nke Fondjomekwet na 9h na ezigbo ụlọ ọrụ. Maka oge ahụ, echere m na ọ kachasị mma ịnweta enyemaka-de-camp. Ọ ghaghị ịbụ nke a ma ama iji kwesị ekwesị ka m chebara ya echiche ma wezuga ya kpamkpam ịnakwere nduzi m. Enweghị m ike inwe Charles Ruffin Toche na-eso m, bụ Chugou a ma ama. Ozugbo m rutere n'ụlọ anyị, ụmụnne m ndị nwanyị nọ na-elekọta anyị, Enwetara m ọṅụ nke ịchọta onwe m nwanne ha nwoke. N'ihi ya enwere m ụlọikpe eze n'ebe ahụ. Egosiri m ha ekele m wee gaa n'ogige ahụ a raara nye maka ngosipụta ahụ. N'ọnụ ụzọ ụlọikpe eze, ahụrụ m ụlọ iri na abụọ ụlọ ahịa na-emepụta oghere nke e wuru ọhụrụ n'ime osisi. Ndị a bụ ohere ndị echere maka nri nke kwesịrị ịgbaso nkwado nke Eze ọhụrụ ahụ. O yiri m na a nabatara m na ụlọ ahịa 3, a kwanyere m ùgwù ma gwa onwe m na, ebe ọ bụ na nnukwu ọkwa ụwa mara ọkwa, a gaghị ama m nke m. M mesịrị rute n'ogige ahụ. E nwere agbụrụ a raara nye ndị isi, otu gọvanọ a raara nye obodo ndị ọzọ, otu agbụrụ maka ndị a ma ama, ndị eze na ndị isi nchịkwa na ndị isi nke ụmụ nwanyị, ndị enyi ha na ndị enyi ha. M wee nọrọ n'oche ndị isi. Ihe dị m mkpa karia ihe ọbụla bụ echiche nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ọchịagha ọhụrụ ahụ, n'ụtụtụ ahụ, bụ isi nke onyeisi. Mgbe ahụ, na-aṅaghị ntị, m na-ele ndị ọkà okwu na-agwa ibe ha okwu n'elu ikpo okwu ruo mgbe a kwusara onye nnọchianya nke ụmụ eze na ndị isi na n'elu ikpo okwu. Site n'inwe obi ike, ọ gbawara ọsọ ka ọ bụrụ akụkụ ya. N'okwu doro anya na nke obi ụtọ, o kwupụtara na ụmụnna ndị nwoke na ndị nwanyị a nwere ike ịnakwere n'emebighị Eze ahụ a ga-ahọpụta. Echere m na ọ bụ ihe amamihe. Ọ na-aga ịkọwa okwu ya site n'iji ohere a mee ihe iji dọọ aka n'ịhọrọ ndị isi na-ewepụ ụmụ nwanyị? Nwa nke nna ya, o nweghi ike ime mgbanwe. Ọzọkwa, o juru m anya mgbe ọ na-abanye n'okporo ụzọ site n'igosi mgbanwe nke obodo nta Fondjomekwet na nnọkọ ahụ. Ọ bụ aka ike. Mgbe m na-ahụ afọ ndụ nwata a, m gwara onwe m na ike na-eme ka nke a dị na Cameroon. Na Fondjomekwet anyị na-efe pavilion Rdpc dịka na Yaoundé anyị na-efe ọkọlọtọ French. Ihe na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ, bụ na anyị na-emepụta ihe nhoputa ndi ochichi nke Rdpc ka anyi nwee olile anya maka ihu oma na nlekota ndi ozo ma n'otu oge ndi mmadu enweghi uzo iji wepu ihe ha na emeputa na ebe ohia . Ọfụụ dị na Yaoundé bụ nke ahụ na-eme ka ego zuru ezu iji zụta mmetụta nke ndị isi France ka ha jide n'aka na a ga-akpọ gị Minista, onye nnọchiteanya ma ọ bụ Onyeisi nke mba ahụ n'otu oge ahụ, enweghị ego maka ịhazi ihe . Ihe aghụghọ abụghị nke nkà ihe ọmụma. Ha na-enwe obi ụtọ n'oge ahụ. Ha anaghị eche echiche banyere echiche. Ndị ọkà ihe ọmụma na-akpọ ndị a dị oke mma mmasị nke ngwa ngwa.
Okwu nke okwu a agwụla. Mgbe ụda mkpọtụ ahụ, nne m nọ na-aga n'ihu nke usoro ahụ nke na-agagharị ebe ebe tamtams nọ. O nweela mgbe ọ gwụchara. N'agbanyeghị nke ahụ, mgbe ọ na-arịa ọrịa, ọ na-ama jijiji, obi dịkwa m ụtọ ịhụ ya dị ka nke a. Ọ bụ nwa agbọghọ nke obi ike. Ọ bụghị onye na-eme ihe nkiri ma ọ bụ onye na-egwu egwu n'okpuru ọchịchị nke nwanne ya na Eze nke fondjomekwets. O yiri m ka ọ bụ naanị ngwá ọrụ ma ọ bụ ka ọ bụrụ akwụkwọ anwụ anwụ na ifufe; ọ nọ n'ebe ahụ ebe Eze chọrọ ya n'enweghị ụgwọ ọ bụla. Ma ọ dị ya mma ma ọ dị mma ịhapụ ya n'ọnọdụ a. Ebumnuche nke akụkọ akụkọ ọ na-edu bụ ịdọta ndị isi na ndị eze nwanyị ka usoro ọmụmụ nke mbụ ahụ nwee nkwado zuru ezu iji hụ ma na-akwado ndị nomine nke Eze oge ochie. Ahụrụ m ụmụ nwoke atọ na otu nwa agbọghọ wepụtara. Ọ bụ nne m na-akwado nwa agbọghọ ahụ. N'oge ahụ, m ghọtara na ọ nọ n'ọkwá dị elu na Mmụọ nke nwanne ya nwoke nwanne ya nwoke bụ Eze. Enwere m ihe mere kemgbe ọnwụ, ọ chọghị ịhụ m tupu ụbọchị ahụ. Ọ gwaghị m ndị bụ ndị a họpụtara nke nwanne ya bụ Eze. Echere m na onye mbụ gbakọtara Tchoumbou, bụ Eze ọhụrụ ahụ. Ma mgbe ọ rutere Lagkam, Djoumbissie anọworị ebe ahụ. Nke a bụ n'ihi na izu ole na ole tupu ọnwụ ya, Eze Kamga kpọrọ enyi ya bụ Eze Chula ka o nyefee ya n'ememe nke iguzosi ike n'ezi ihe. Mgbe nke a gasịrị, enyi a na-aga otu obere ndị nnọchiteanya, gụnyere ụmụnne nwanyị abụọ nke Eze Kamga, zigara otu gọvanọ n'obí Bafoussam ngwugwu. Ngalaba a gụnyere, site n'usoro, aha ndị nomine maka Chiefdom nke Fondjomekwet. Chiefs Batié, Banja na Fomopia natara akwụkwọ. Ya mere, mgbe usoro ọgwụgwọ ahụ hụrụ Djoumbissié gburugburu Banja, e jidere ya wee duga Lagkam mgbe ọ na-echere ndị nnọchiteanya ya. Site na ịkọ nkọ, a pụrụ ikwu na ọ bụ ihe nchekwa; nyere ọchịchọ nke ọrụ eze. N'ihi na, ma ọ bụrụhaala na onye ahọpụtaghị ụzọ nke Lagkam, ọ nwere ike ịnweta otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ na enweghi ike ịchị achị. N'ihe gbasara ụmụ anụmanụ, ụmụaka ndị a na-agbakọta na mbara ọha na-eje ozi dị ka ọta maka ndị nọ na Lagkam. A na-akpọkarị Lagkam Lâkam na ụfọdụ ndị edemede; ma mgbe m dere "Lagkam" ọ bụ nke ahụ ka m na-akpọ ya na patois. Okwu a pụtara "ebe a na-ezukọ" n'ụzọ nkịtị, ọ pụtara "mba ndị na-achịkọta". Ọ bụ na nke a na ọchịchị Eze kachasị mma na-enwetakwa ikike maka ọrụ ndị ga-adaba n'ime ọrụ ha. Mgbe enweghi ike inye onye nnọchianya nke Head nke State Eze ọhụrụ nke fondjomekwets, anọla m na Bafang ebe m hapụrụ n'ụtụtụ. Ihe ngosi a dị ka m. Na obodo nakwa na ala eze, ọ ga-edo anya na eze nwere ikikere naanị ruo n'ókè ọ na-ekweta ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke ndi mmadu na ndi mmadu na-anabata ikike ya.
Mana olee ebe enyi m Onye isi nke Bépanda ga-aga? O soghi na ndi choro. Ahụbeghị m ya na njem ahụ. N'echiche m, echere m na ọ ga-eme onwe ya ka ọ daa ala mgbe ihe nzuzo nzuzo nna ya nwụrụ nwere ike ịgwa ya: - ịnọghị na ya. Bọchị abụọ ka nke ahụ gasịrị, ọ naghị akpọ ekwentị m. Ekpebiri m na m gaghị akpọ ya ọzọ. Ọ bụ ezigbo ngwaahịa nke Biyaism. Anyị ekwesiri imechi usoro ntuli aka iji kwado Onye isi ala ma ọ bụrụ na enwere ike imeri ya? Ọ bụghị ntozu oke omume na ndọrọndọrọ ọchịchị ka ị kwado ịzọ nhọpụta ma ọ bụrụ na ikwesighi ịkwado mmeri? Dị ka ndị na-ekwu okwu si kwuo, njikwa nke ntuli aka na Cameroon anaghị ekwe ka a gbanwee ya. Anyị na-ekwe ka ekwuru ya ka anyị wee ghara ikpughe onwe anyị na ọrụ nzuzo dị ka fondjomekwet, anyị hapụrụ eze ka ọ mee ka ịghara igosipụta onwe anyị na ọha nzuzo. Nke ahụ bụ ndụ. Na Fondjomekwet, ndi nhoputa ndi mmadu abụrụ otu onye, ​​eze ya na-anwụ anwụ.
Akụkọ a dị mkpirikpi yiri ka m zuru oke iji kwupụta ebubo ndị Kamites ma ọ bụ Kemites (okwu nke Cham ma ọ bụ Kam, aha mbụ nke Ijipt) na ndị ọzọ Pan-African na-emegide ọchịchị onye kwuo uche ya. Ka anyị buru ụzọ tụlee ihe ha na-ekwu:
1- Ụdị gọọmenti na-achịkwa agbụrụ ndị omenala bụ ihe eji eme ihe na ọkwa mpaghara.
2- Anyị anaghị eme ka onye ọchịchị ahụ nwee ọchịchị
3 - ochichi onye kwuo uche ya abughi ezigbo nsogbu nke obodo.
4- N'ebe ọdịda anyanwụ, ọchịchị onye kwuo uche ya na-egwu ndị mmadụ.
5 - ochichi onye kwuo uche ya bu uzo kachasi elu nke imperialism
6 - Afrika ga-emepụta ihe omumu sayensi, nke aku na uba na nke ochichi.
Inweta anyị akụkọ dị ka akwụkwọ collection, m gwa Abigel deconstruct ndị a amụma na-egosi na ndị a ojuju nke Democratic mgbalị sitere na regressive na repressive echiche merisịrị si 60 afọ site American Barry Goldwater. A ghaghị ikwu na mpempe Aka (e), nke ebumnuche na mmaliteghachi nke Africa site n'aka nke aka ya, mara nke ọma na United States na n'etiti mba ndị Africa na Europe. Pan-Africanism bu oru di egwu nke na-acho ka ndi mmadu kwenye n'udo na Afrika kemgbe 50. Dịka Onye ọ bụla na-eme ihe nkiri dị iche iche, ihe dịgasị iche iche nke ịbịaru nso dị ha mkpa. Ma o yiri m na otu na-ekwu na ndị a na-arụ ọrụ a na-abanye na telivishọn nakwa na ha nwere ndị na-agụ akwụkwọ, ndị na-akwado ọchịchị onye kwuo uche ya. Onye ndu ha bụ Banda Kani.
1 - Ụkpụrụ gọọmentị na ndị isi obodo ndị a na-ahụkarị bụ ihe a na-emepụta na steeti.
Ndi ochichi omenala na-adi ndi mmadu aka mgbe ha rutere steeti. Enwere ike ịkpọ Mobutu ebe a mgbe o jiri onwe ya tụnyere onye ndu Bantu onye, ​​dị ka ya si kwuo, nwere ike ịhapụ ike site ọnwụ ya. Anyị nwere ike ịgụ ihe a n'uche Biya mgbe, mgbe ọ na-abanye n'ike, o debere n'ememe nna ochie dị iche iche na mba ya. O doro anya na nke a na-akwado echiche a na-enyo enyo banyere "onyeisi ndị isi". N'akwụkwọ ndị isi, ọ bụ nna ya, bụ onye isi ya, na-achịkwa ya. Na ọkwa obodo, ikike nke Onyeisi ahụ nwere ike ịbịa naanị site n'ikike nwa amaala ọ bụla nwere ike ịchọrọ ma eleghị anya ịme ọrụ nke President nke Republic. Nke ahụ pụtakwara ntuli aka na ngbanwe. Ndị obere Afrika, bụ ndị isi obodo ha mbụ, ga-achọ igosipụta ịbụisi mgbe ha rutere n'isi ụlọ ọrụ ahụ. Dị ka usoro nke ọchịchị, ha na-ezukọ ihe ndị na-adịghị mma banyere ezinụlọ ha, agbụrụ ha, ndị enyi ha na-akwụ ụgwọ nke mba ndị ọzọ. Ihe ndị a na-ejupụta na nrụrụ aka, imebi iwu, inweta ahịa na igbu mmadụ. (1) Ya mere na ruo mgbe ha nwụrụ, nzọpụta nke ihe ùgwù bụ nanị site na ịrịọ nwa nke onye nwụrụ anwụ ma ọ bụ onye ya na ya na-arụkọ ọrụ na ike. Nwa nwoke a na - eme ka otu ndị otu na - ahụ maka ndị na - agụ akwụkwọ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na - eme ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ghara itinye aka na ntuli aka. N'ihe ha na-ekwu, ha na-ekpuchi anya ma kpuru ìsì, ha na-ahụ naanị egwu ha maka nri ha dị ka ndị mmegide ha na-emejọ ma na-abara ha mba. N'ịleghara ihe ịma aka nke oge maka mba ha, ha apụghị ịkwadebe ntorobịa ha iji merie ihe ịma aka nke ọdịnihu. Ndị mmegide anyị na-ekwu na anyị na-ahụkwa ndị America na ndị Bush na ezinụlọ anyị taa na Hillary Clinton. Nke a ezighi ezi. Ndị primaries na ndị America, na-enye aka n'eme ka ngosi nke onye ọchịchị na-ahụ maka ndị ga-aga. Ya mere, n'agbanyeghị ogo mmeri ya na nhoputa ndi ochichi, ndi mmeri di n'okpuru ochichi aka ndi ochichi. United States of America bụ ike ọchịchị onye kwuo uche ya, ọ bụkwa onye na-enye aka n'emepụta ọdịnihu na ọbụna na -emepụta echiche anyị banyere ọdịnihu.
Ndị eze Africa nwere ikpe mara na ha ahụghị ụdị ahịa ohu ahụ. Ha na-ama ikpe na ha anaghị ahụ ka ndị ọchịchị na-abịa. N'ikpeazụ, ndị a na-ewere maka ndị isi anyị, ha niile mara ikpe maka na ha enweghị ike ịbanye n'ala ha, otu ọrụ ahụ siri ike dị ka nke China, South Korea ma ọ bụ ọbụna India. Ndi eze Afrika a na ndi isi ha kwesiri ikweta na ha bu ndi ozo n'akwukwo ihe. Anyị chere na ọ bụ ọdịda. Ma ọ bụrụ na anyị adaala ugbu a, ọgbọ ndị ga-abịa n'ọdịnihu ga-ekwubi na ọ bụ nkwarụ. Aesop bụ onye sage Afrika. Ọ ghaghị ihu na ndị na-agụ akwụkwọ ndị Europe n'oge ya, bụ ndị na-akwa emo maka eziokwu ahụ nke ndị Africa na-agụghị, enweghị ike inweta uru site na amamihe ya. Ọ dabara nke ọma, La Fontaine ji obi ụtọ chọpụta ọrụ ya. Anyị nile gụkwara akụkọ "Wolf na Nwa Atụrụ ahụ. Mana ole n'ime anyi maara na n'ilu a, nwa aturu ahu bu onye ozo? N'ọnọdụ ọ bụla, ndị ọzọ nke ụwa ghọtara ya ma e wezụga ndị Africa. Mba ikpeazụ iji ghọta ya bụ China. N'oge na-adịghị anya mgbe ọ ghọtara ya, ọ gbanwere Wolf. Olee otú ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ? E nweghị ihe ọzọ ị ga-aghọta ma ọ bụrụ na ị ghọtara akụkọ Aesop. N'oge a, ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị bụ ịmata ihe dị na ya. Buru n'uche na ọdịnihu bụ ịga n'ihu nke oge ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na anyị azaghị azịza ya, anyị ga-echefu ọdịnihu. Oge osisi a yiri ka m bụ Democracy. Ndi ochichi onye kwuo uche ya, site n'echiche di iche iche na ihe ndi ozo nke o na-enye, na-enye aka n'egosiputa ezi uche na ya mere ka ndi mmadu zuo oke. Ndị mmegide anyị na-ekwu na n'ime ndị isi obodo na-enweghị izu ohi ma ọ bụ ịzụta ego. Ọ dị njọ ịmara ndụ ụbọchị a na ndị isi ndị a. Ebee ka akụkọ ndị a banyere vampirism na amoosu sitere na ndị isi? Enweghi ego maka ego ọha na eze ma ọ bụ nke onwe ya dị n'ogo n'elu ọkwa vampirism. Onye ngbasi ahu na egbu mmadu, onye ozo na egbu mmadu. Otú ọ dị, anyị na - akpọ gị ka ị na - anabata ndị isi obodo omenala n'echiche bụ na ha bụ ihe nketa nke mbụ na - enye aka n'inweta ọdịbendị na ọdịbendị anyị. Ihe omuma aku na uba na ndi mmadu nke ha na-ahazi na-eme ka nnukwu ego nke mba anyi. Mana ndị isi ndị a enweghị ike ịme ka ha bụrụ ihe karịrị ụlọ a chọrọ.
2 - ochichi onye kwuo uche na Colonies na Postcolonial States.
The echiche na-eru French ógbè nke Africa bụ ziri ezi uche nke ndị na-akatọ n'echiche na France na-arụ ojuju nke ndị a bụbu chịrị maka inyere igbu ndị separatists onye nwere ike chere ha ibu ọrụ na-eduga mba ha n'inwe ọganihu na mmụba. O yikwara m na ọ dịghị otu nchịkwa ndị ozi na mba French na-asụ taa, nke na-arụ ọrụ n'enweghị ihe ọmụma nke ndị ọrụ French. Ma n'ebe a, m na-ahọrọ okwu postcolony ga na-eche ihu nke onwe chọrọ a recolonization nke obodo ha na nke a bụ ihe yiri ka ziri ezi na-akara Lionel Sinsou Benin na Paris mkpesa nke ọhụrụ President mba a kemgbe ọ gara nleta mbụ na France. (2) (3) N'ọnọdụ ọ bụla, ikike ndị America ahụlarịrị mkpa a dịwanye mkpa maka ịdabere n'etiti ndị ọkachamara n'Africa. Onye nke olu olu Donald na-achọ ka a maliteghachi n'Africa, ọ sịrị na-akụziri anyị ka anyị mee egwuregwu. N'eziokwu, ọ bụ na United States agaghị ahapụ ndị Europe na ndị Asia ma ọ bụrụ na a na-akọwa ihe omume a. Otu n'ime ndị Republican, ọ bụ ihe a na-apụghị ikweta na oge a na ụlọ ọrụ America na-azụta ọnụ ala French dị ọnụ ala na French na Bekee mgbe ha nwere ike iji ọnọdụ ha kachasị elu nweta ohere ndị a ozugbo.
Ọganihu nke ochichi onye kwuo uche ya yiri ka ọ bụ onye na-apụghị ịgbagha agbagha na mba anyị. Ihe akaebe nke a bụ mmụba nke akwụkwọ akụkọ na nzukọ nke oge nhoputa ndi ochichi. Na alaghachi azụghachi azụ dị ala n'ihi ọchịchị onye kwuo uche ya, na-abịa site n'ịnọghị ọchịchị dịka onye na-ekpuchi ahịa ma dị ka ihe na-adịghị mma maka ndị na-eme ihe nkiri akụ na ụba. Ihe mgbaru ọsọ nke ịchịisi na mba anyị abụghị ịchụso mmekọrịta mmadụ na ibe, ma ọ bụ usoro iwu dị mma nke ụlọ ọrụ, mana nkwekọrịta nke ọha mmadụ na ụlọ ọrụ maka njedebe onwe ya, ọ bụghị iji nyere aka ndị na-eme egwuregwu, ma na-enweta ike dị ka o kwere mee. Nke a na-akọwa ihe mere Biya ji sị: "Adịla ike na-achọ. Ụzọ nke ikwu "bịa ma were m ma ọ bụrụ na ị nwere ike. Ya mere, anyi no n'egbasi ebe ndi na-achi ochichi bu ndi ozo. Nke a abụghị ihe kpatara ọchịchị onye kwuo uche ya. Ọ bụ enweghị onye Democrat n'ike.
Ot'u esi eme ka ndi ochichi nke ndi ochichi na-acho ike na steeti di m ka mbu ihe ajuju nke ochichi onye ochichi na mba anyi ma obughi ikpe nke ochichi onye kwuo uche.
3 - ochichi onye kwuo uche ya na-enyere aka mee ka ezigbo nsogbu nke ọha mmadụ.
Ọ bụghị aka ọchịchị onye kwuo uche ya ka ọ na-akpata nsogbu nke ọha mmadụ. Ọrụ a bụ maka ndị na-eme ihe nkiri na-eme ka ndụ onye kwuo uche ya dịrị ndụ. Nke a bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Mkpa a iji dozie mkpa nke ndị mmadụ iji zute ha na usoro nchịkwa nke ọchịchị bụ ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Mana onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-enye ndị ọchụnta ego ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka ma ọ bụrụ na ike, ahịa, azụmahịa na ire ure na-aghọ ndị na-eme ihe nkiri na ike. Ikpe na-ezighị ezi nke usoro ndị a na-eme, na-akpọ ndị na-agbachitere onwe ha ndị ọzọ maka ike. Site n'echiche nke ike, njide onwe onye na-agbachitere onwe ya nwere ike iwere ụdị ihe ịma aka na-egbu egbu. Anyi ahuwo na akuko omuma m na ikike nile bu ikpe na-ezighi ezi n'ezoghi ndi ozo gbapuru ha. Ịgbanwegharị mgbe niile na steeti a bụ ihe mberede na ihe dị mkpa na nchọta maka nkwụsi ike na arụmọrụ mmadụ. Ọchịchọ a maka imeghari na nchịkwa bụ ezigbo ebumnuche nke okike. A na-agbanwe ahụ mmadụ n'onwe ya kwa afọ iri na otu. Nke a bụ ihe mmụta nke Barack Obama na ndị Afrika Africa na nwata anyị bụ ndị chọrọ ịnụ ọkụ n'obi. Ma ikike ha nwere bụ ọchịchị onye kwuo uche ma ọ bụ na ọ bụghị, gịnị ka China ga-enwe na Deng Xiaoping, Burkina Faso na-enweghị Sankara, na United States na-enweghị Kennedy?
Deng Xiaoping bụ ndị nta na Kọmitii Kọmitii na-achị mgbe ọ malitere ime mgbanwe iji mee ka China bụrụ "ogbako nke ụwa." Na-enweghị mgbanwe ndị a, China ka ga-abụ onye ọkpụkpọ egwu n'akụkụ ụwa. Anyị maara mgbanwe ndị ọrụ ugbo nke Sankara na Burkina Faso. Ọ bụrụ na n'oge a, ndị Burkinabe nwere ike ijide ndị isi aka ya, ọ bụ kpọmkwem n'ihi na ekele maka mgbanwe nke Onyeisi ya na-adịru mgbe ebighị ebi, ụnwụ ahụ esiwo n'ebe ọ nọ pụọ. Kennedy kwalitere usoro ntụrụndụ American n'oge ọhụụ na nkà na ụzụ, United States adịghị njikere. Ihe omume a enyere ụlọ ọrụ US ndị nataworo uru site na nchọpụta nyocha ọhụụ iji chịkwaa ọnọdụ ụlọ ọrụ ụwa maka afọ 40. The Republican Reagan bụghị naanị merie ndị ida nke USSR, nke n'aka nke rata ya anyị ntọhapụ jails nke otu otu, ma nye a ịrịba akwalitewo Silicon Valley nke jere ozi dị ka ntọala ulo oru site All ọjọọ ndị ọzọ ( mgbe ahụ, Onye isi oche n'okpuru Clinton) nke usoro "Ụzọ E Si Nweta Ozi" nke bụ ma sextant na onye na-egosi ihe n'Ịntanet ka ọ na-anọ taa. Ihe Barack Obama na-eme na mmepe ulo oru ngo na 7 afọ karia Ahidjo-Biya na 56 afọ nke isi. Ihe omume ikpeazụ nke Black a, na ụbụrụ mmadụ ga-enye ụbọchị iri na ụzụ ndị ahụ na ọkara mmadụ. Ndị agha ndị a ga-ekpuchi ụlọ nkwakọba ihe na mbara ala ndị na-emegide nwoke ahụ ma kwe ka mgbanwe mbụ nke mmekọrịta ahụ. Nhọrọ ọzọ nwere uru; a na-enyefe ihe ndị na-emefu ego nwere ike iwepụta ego ahụ. Ma dika ụbọchị nwere ike ịga nke ọma n'abalị ahụ, onye na-eme mgbanwe na onye na-enye nsogbu na-aga n'ihu ga-enwe ihe ịga nke ọma ma na-eme atụmatụ ndị ga-achọ ime ka akụ na ụba nke mba ahụ baa ụba site na ọnụ ọgụgụ dị nso na njedebe. Ọ bụ site na nkà ihe ọmụma a na ọ dị mkpa ka a kwụsị iwu ndị dị na isi mba America. A na-ejikọta ike nke ụlọ ọrụ US na echiche a. Ndị mmegide anyị na-ekwu na, nde mmadụ nde 30 bụ ndị ogbenye na nke usoro. Ha feint ichefu na mba anyị, ịda ogbenye mgbe ụfọdụ esịmde 80% nke ndị bi na na, na US, 20 nde n'uzo na ezighi ezi kwabatara na-mma na-ebi ndụ karịa ka ọ laghachi obodo ha si pụta. Anyị na-ahụ na nkwenye nke Bernie Sanders nke onye nyocha Hillary Clinton kwuziri ọzọ na, karịa mba ọ bụla ọzọ, ikike ndị America na-ajụ bụ nke a na-akparaghị ókè.
4 - N'ebe ọdịda anyanwụ, ndị mmadụ bụ ihe na nzube nke ochichi onye kwuo uche ya
Anyị na-ewe ike na Europe maka ihe kacha mma. Onye ndu ọ bụla chọrọ imere ndị ya ihe dị mma karịa onye bu ya ụzọ ma jiri ya mee mgbanwe maka akụ na ụba na nke onye kwuo uche ya. Ọbụna mgbe mgbanwe ahụ mere ka ọ bụrụ nnupụisi, a kwetara na mgbanwe ndị a bụ ikpe ziri ezi. Dịka ọmụmaatụ, Margaret Thatcher họọrọ ịhapụ nhoputa ndi ochichi karia itinye aka na nkwonkwo ndi oru ahia nke Bekee. Nke a bụ ihe dị iche na ndọrọ ndọrọ ọchịchị si populist. Otu na-eche nanị banyere ọdịmma dị mma nke steeti. Onye nke ọzọ na-eche nanị banyere ọdịmma onwe ya ozugbo, na-ewere onwe ya maka ndị mmadụ. N'etiti mkpanaka abụọ ahụ, e nwere oke mmiri dum. Otu kwere na okike nke ndị mmadụ ma mee ka ọwa dị mkpa iji nweta ya. Onye nke ozo na-ekwere na afọ ojuju nke ndi mmadu wee gbanwee mgbalị mba a maka ebumnuche a. O yiri m ka ọ bụ isi iyi nke ihe ịga nke ọma na United States, Germany, England, Japan na Switzerland, na-emegide mmegide nke Gris, Spain na Venezuela, bụ ndị na-akụ ụkọ ugbu a. Onye Ogbenye Afrika nke Chineke na-ekwusi okwu ike maka otutu ochichi onye kwuo uche ya mgbe o kwuru, sị: "Ihe niile na-agafe site n'otu ụdị gaa na onye ọzọ ma ọ bụghị otu. Nke a pụtara, na ọkwa nke steeti, mgbanwe nke mmadụ na, mgbe mgbe, mgbanwe nke iwu nke pụtara ntụgharị. Mmezu nke iwu nke Chineke Thoth "Unu nkịtị mgbe ọjọ a kwuru ka Eziokwu na-enwu n'elu niile, dị ka anyanwụ," presupposes a ohere ebe onye, ​​ọha na onye kwuo uche ohere na-ekwe nkwa. Na 1964, aku na a president nkuzi megide Lyndon Johnson nwa akwukwo nke Mafia nke agha ụlọ ọrụ na Vietnam War, Barry Goldwater gwara ya na-ege ntị na Pennsylvania na "The Federal ike ga-ezu na-ekwe ka na-anọghị free na-agba ọsọ maka nnwere onwe nke onwe, iji zụọ ọrụ, na egwuregwu nke ndị ahịa, na logics asọmpi na zuru ezu ugbu a iji rụọ ọrụ na-akwalite ha. " Mgbe Barry Golwater na-ekwu na, ọ bụ nanị onye ntụgharị okwu maka ndị ya nke African God Thoth. Na oge ahụ, ọnọdụ free bụ ndị Socialistian socialism na ndị ọchịchị Kọmunist Marxist nwere aka ike na-achị: China na Union of Soviet Socialist Republics. America ama tie mkpu "Ala na ultra-liberalism!" Goldwater furu efu na ntuli aka. Ma, ndị nke ya abụọ mechara bilie dị ka ugwu ọkụ abụọ na-agba ọsọ, Reagan na Tacher. Anyị nwere ihe ndị anyị maara. Taa, ajụjụ a maka China bụ ogologo oge ka ịmepụta ego na-enweghị ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke nnwere onwe?
5- Ụkpụrụ eluigwe na ụwa, ụkpụrụ ndị na-eme ka ọ bụrụ ihe e dere na ya, abụghị ndị ọchịchị.
"Mepee (maka ndi mmadu) Ala nke Ìhè! Akwụkwọ Chineke ndị dị egwu na-ekwu. Anyị ekwuwo na ebe ọzọ na ụmụ mmadụ nọ n'okpuru mmegbu nke mkpa. (4) Afọ ojuju nke mkpa dị ukwuu na-eche na ọ dịkarịa ala nke nzukọ mmadụ. Site na nzukọ a na-aga nkewa ọrụ na ịdọ aka ná ntị. Ịdọ aka ná ntị chọrọ ikike nke na-edu ma na-eduzi ya. Ikike nke ikike a bụ naanị omume ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ịma aka ma jiri ya tụnyere ihe ọzọ ga-ekwe omume. Anyị na-ekwu okwu n'oge ike a na ikike nke ọ bụla onye omee ọ bụla nwere ike iji nweta nsọpụrụ. Nke a bụ Democracy. Ọ bụ mmụọ nsọ zuru ụwa ọnụ. Na-ekwu na ndị na-aghọtaghị ga-amanye ime otú ahụ. Nke a bụ okwu Mitterrand na La Baule. Anyị aghaghị iji ịhụnanya na ịma mma na-ewu ụlọ ọrụ ndị na-eweta ndụ onye kwuo uche ya. Nke a bu atụmatụ ochichi nke Plato. Mkparịta ụka dị mkpirikpi, Banda Kani na-ebo ebubo na ha bụ ndị kwuo uche onye gburu Socrates. O kwere omume, mana ugbu a, ọ dịghị òtù onye kwuo uche ya na-akwado ndị ọchịchị onye kwuo uche ya na ụwa, nwere ike igbu ndị ahịa ya. Nke a abụghị ụgwọ ọrụ ugbu a.
Mgbalị ochichi nke United States na ochichi onye kwuo uche ya na-emetụta ihe kacha mma nke mmadụ. Echere m banyere ọrụ nke Peace Corps na-arụ, omume nke ndị ọrụ afọ ofufo na-enwe ọganihu na mgbalị nke USAID. Ndị America na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ DVD n'efu nke akwụkwọ 1000 na-akọwa usoro ntanetị dị iche iche. Ụlọ akwụkwọ mahadum kachasị ọnụ maka ndị America, na-enye n'efu maka ọmụmụ ihe n'ịntanetị maka ndị ọzọ nke ụwa. Enwere ntamu nke òtù ndị America na-enyere aka ịgbasa usoro ochichi onye kwuo uche na mba anyị, nke ndị mmekọ CIA. Enweghị m ihe akaebe. Ọchịchị Democratic chọrọ ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme ka echiche dị iche iche. Ọ bụ naanị ihe bara uru na ha na-ahụ n'ebe ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na ọnọdụ anyị anaghị enye ha ihe nha.
Anyị ga-achọ ochichi onye kwuo uche ya. Anyị ga-ahụ ochichi onye kwuo uche ya. Anyị ga-achọ ka ụlọ ọrụ ndị na-eme ka ndị ọchịchị na mba anyị bụrụ ndị mara mma karịa ụlọ ọrụ America. Ndi otu ndi otu ochichi nke ndi United States, nke meputara telivishọn, Intanet, kọmputa, ndi nbipute, robotics, satellites ... aghaghi imeghari ya n'enweghi oge ozo. Na ndagwurugwu Sillicon dị ka ihe si n'aka Barack Obama, a na-eme nchọpụta na 6000 ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa iji mee ka o kwe omume ịmepụta ego zuru ụwa ọnụ maka mmadụ niile ma si otú ahụ gbuo ịda ogbenye n'ụwa. Banda kani na-ekwu na o nweghi oke ntuli aka na West. Ọ na-ekwu ya n'ihi na ọ maara na ọ bụ onye a na-apụghị ịmalite ịhụ na ndị na-ege ntị n'Africa, ọ nwere ike iji ụgha. Ọ na-achọ inye aka na ụzọ nke aka ya ịmebi akọnuche aghụghọ n'etiti ndị ntorobịa Africa. Ọ jụ ịsị na ọ bụrụ na nhoputa 100 / 100 dị n'Africa enweghi mgbanwe, pasent a na Europe dị nso na 1 maka 1000. Ọ na-ekwu maka nkwupụta nke njikọ na-adịghị ike nke na-apụghị ime n'ụwa ebe otu onye n'ime iri America na-achịkwa ịde ụwa ma mara otú e si arụ ọrụ n'ọdịnihu. Ọzọkwa, ọ bụrụ na anyị ahapụ United States, anyị na-ahụ na na obodo Tokyo naanị, anyị na-azụta na ọnwa 6, akwụkwọ ndị dị iche iche karịa mba niile n'Africa n'otu afọ. Obughi ihe ndi Pan-Africanist choro na ikpesa Chineke na okwu ojo ya n'ime Baibul ma obu Koran, nani akwukwo ndi aguru n'Afrika. Nke a bụ ihie ụzọ nke Gbagbo na ndị ozuzu aturu ya. Ogologo ochichi na nke aku na uba nke Afrika bu ihe omuma. E nweghị ọrụ ebube na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N'ihe dị n'usoro nke Reagan, e mebiri USSR n'ihi na Stalin gburu ndị niile na-eche echiche nke Union. Africa na-ada ada n'ihi na oru oru bu chi nke ndi nkuzi anyi na ndi isi anyi. Chi nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere isi atọ, nkwekọrịta, kleptomania na ịjụ ndị mmadụ. Chi ndi a nile bu ndi di na chi otu chi di ike: buffoonery. Nke a na-akọwa ihe kpatara ya, ruo ogologo oge, ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị-akụ na ụba-nhazi mafia nke dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ nwere ike ịchọta ụda na mba anyị, nnupụisi na ọbụna mgbukpọ mgbe nke ahụ nyeere ha aka. Àyi agbanweela kemgbe ụbọchị anyị rere ndị agbata obi anyị n'ịbụ ohu? Ihe na-egosi na anyị agbanweela. Ebe obibi postcolonial, site na njedebe na ochichi onye kwuo uche ya, agbagharala ọrụ nkà mmụta na ọrụ nchịkwa n'ime obodo anyị.
Onye ochichi onye isi ochichi na-acho ike site n'igbu mmadu, ogha ma obu ure. Onye ochichi onye ochichi na-enwe mmasị na-enwe ike site n'ịghọ aghụghọ ule, aghụghọ ma ọ bụ ire ure. Onye ochichi Democra na-achọ ịnọrọ ike maka ihe karịrị afọ 10. Ọ bụghị n'ihi na ọ bụ naanị na mba ụfọdụ ka anyị na-ahụ nke a na ndị Afrika ekwesịghị ịkekọrịta echiche ndị a. "Ekwesiri," ka Chineke Thoth kwuru, "na-achọ izu okè n'ihi na ọ bụ otú ahụ ka ị ga-esi ruo ihe mgbaru ọsọ ahụ. Ị ghaghị ịma na ọ dịghị ihe zuru okè ma na ị ghaghị ime ya ọchịchọ gị na mgbaru ọsọ gị. Ndị Afrịka oge ochie bụ n'ezie afọ ole na ole ndị anyị na ha dịkọrọ ndụ na-apụghị inweta.
A gwara anyị na America na-eme ihe ike. Anyị chefuru ikwu na, ọ bụrụ na anyị etinye aka na ahịa ohu na mmeri ndị Arab, okpukpuchi Africa ejiriwo ndị Africa gburu karịa ndị na-azụ ụlọ nakwa na n'oge a ka a na-egbu a. Ọ bụrụ na ndị isi anyị, ndị ụlọ ọrụ ha na-azọrọ na ha ṅụrụ ọbara ụmụ amaala ha na iri anụ ha, nọ n'isi Hyper Power America, ụwa ga-aka njọ. Ọ bụ ezie na Banda Kani na-arụ ọrụ anti-imperialist populism, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị 300 Russian na ndị nledo China natara ụzụ na nkà na ụzụ ihe ọmụma sitere na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị America na-eme nnyocha maka uru akụ na ụba nke mba ha. Nnyocha 3000 nke China na United States na-efu ego gọọmenti China. Ndị Russia na ndị Chinese maara ebe ha nwere mmasị, anyị anaghịkwa eṅomi ha. O nwere ike ịbụ na a na-ahụ Senghor nanị site n'ịkpọ mmetụta efu na enweghị ezi uche. Ọ bụghị enyemaka maka ndị ntorobịa anyị ịgha mkpụrụ nke enweghị ọmịiko maka mba ndị kwuo uche ya, nke na-eme ka ụba na ọdịmma nke ụwa dị ukwuu. United States bụ agha na Europe na Middle East n'ihi agha ụwa ikpeazụ nke ha na-ebughị. Ha bịara napụta nna ha, ndị Bekee. Ha nọ na Japan maka ịbụ ndị mbụ Japan merụrụ. Ha nọ na South Korea iji gbochie ize ndụ ọjọọ nke China na North Korea. Ha na-ata Saddam Hussein ahụhụ maka ule ya na mmemme Sept. 11 2001. Ha nọ n'Africa ka ha ghara ịhapụ ndị niile ha na-agba ọsọ, otu mba na-adịghị ike. Ihe ndabara nke Gaddafi sitere na ihe omuma aku na uba ya. Site na oru ngo ya maka Fund Fund Monetary, enye ama egwu na ya nwere onwe ya n'aka Afrika ndi ozo site na nlekota ego nke ego ego French. Okwesiri ighota na n'olu ndi agha ya, Sarkozy ga-akwụ ụgwọ a na Libya, United States maka nloghachi France na NATO. Ọ na-agwa onwe ya na Washington na ngwá ọrụ agha ndị Germany nwere ike ime ka Russia ghara ịdaba na mbuso agha. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, France dị ize ndụ n'ihi na ọ dị nso na Germany. Nke a bụkwa ebe eziokwu gbasara "egwuregwu America" ​​si. Na Libya, America enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị iji kwado Sarkozy na ihe efu ya. Lee Pentagon, Ihe kpatara ya bụ ndị Chinese na ndị Russia na-adịghị enye nkwa maka udo ụwa. Ulo oru ochichi nke aka ha abughi ihe kwesiri ekwenye. Liberia Charles Taylor egbula oge ịhapụ ike mgbe Bush gwara ya. Gaddafi gaara eme otu mgbe Obama gwara ya.
Nzuzu di n'usoro ochichi onye kwuo uche ya na o na eme ka ndi mmadu megharia ihe ndi mmadu.
6 - Onweghị ihe ọ bụla ga-emegharị n'ihi na sayensị ụwa niile dị ugbu a bụ agbụ nke Ancient African Science wepụrụ akụ anwansi ya.
Anwansi anwansi nke sayensi nke Africa abughi inwe anya ojoo n'ihi na anyi agaghi aghota ihe obula. Nsogbu niile na-ebilite ọzọ n'Africa, ndị nna nna anyị bụ ndị Ijipt doziri ma belata, ndị Nubia. Enwere ike ịchọta sayensị, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta ọhaneze na akụkọ Aesopean. Banyere nkà ihe ọmụma, akụkọ ifo na-enye ihe zuru oke n'agbanyeghị ngbasa na nsụgharị nke nsụgharị ụfọdụ n'asụsụ Grik a sụgharịrị n'asụsụ French ma ọ bụ Bekee nke rutere anyị.
N'elu mgbasa ozi, Tayou Kamgain yiri ka ọ na-ekwu na n'Ebe Ọdịda Anyanwụ, echiche sayensị sitere na nkewa, site na iche iche. Mgbe Africa nọ, sayensị gbasara banyere mgbagwoju anya, otu na otu anaghị agụta ya. Tayou nwere ike ịbụ eziokwu, echeghị m otú ahụ. Ọ dịghị ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-akwado ya. N'eziokwu, n'oge ngosi na onye nta akụkọ bụ Juliana Tadda, maka ajụjụ banyere nkà mmụta sayensị Africa, Tayou kwadoro azịza ya site na ịkọ akụkọ nke mmemme na-aga nke ọma, ejiji ejiji na Cheik Anta Diop Institute. N'ebe m dị ka onye na-ege ntị, achọpụtara m na onye nta akụkọ ahụ ihere nwere nkwanye ùgwù ịghara ịgakwuru ajụjụ ndị a. Ka anyị na-atụle ndị a dị iche iche nke ndị inyom na-abịa ọnụ na-na-esi ubi ubi ndị òtù ha n'oge ịkọ, mkpụrụ na oge owuwe ihe ubi, e nwere mkpụrụ nke ubi mgbe na-abịa azụ na otu onye nwere na ubi. O yiri m na Tayou bụ onye na-agụ akwụkwọ ndị Africa a nke na-agụ akwụkwọ nke ndị na-ede akwụkwọ banyere afọ ole na ole nke ịgba ohu na ọchịchị ndị ahụhụ anyị nwere. Ndị a na-eche na ha nwere ike ịgbanwe ihe, ha na-enyere aka ịzụlite àgwà nchere na-ahụ n'etiti ndị na-eto eto anyị. Kedu uche anyị nwere ike isi nyere mgbagwoju anya na otu onye Tayou chọrọ imegide? Akụkọ banyere Osiris na-azaghachi n'ụzọ dị mma.
"Geb, chi nke ụwa, na Nut, chi nwanyị nke Eluigwe, nwere ụmụ nwoke abụọ bụ Osiris na Seth, na ụmụ nwanyị abụọ, Isis na Neeti. Osiris lụrụ Ishis na Set, bụ nwunye Nefat. Osiris chịrị Ijipt. Seth nwere ekworo, choro igbu ya: Set mere igbe iji tụọ ozu Osiris, o wetara ya na oriri. Ọ mara ọkwa na ya ga-enye ya onye, ​​nke dinara n'ime ya, ga-ejupụta ya n'ụzọ zuru oke. Mgbe Osiris dinara ebe a, Seth mebiri mkpuchi ozugbo, tinye ya, ma tụba ya n'oké osimiri. N'ịchọsi ike, Isis na-achọ ya na Finishia. Ọ chọtara igbe ozu ma weghachi ya n'Ijipt. Ma Set gbalịrị ijide ahụ ya ma bee ya n'ime ụzọ iri na anọ ọ gbasasịrị. Isis chịkọtara akụkụ ndị gbasasịrị agbasapụ nke di ya, jirighachi aka nke chi Anubis, kwụnye ya n'íkwù ma mee ka ọ dịghachi ndụ. Kemgbe ụbọchị ahụ, Osiris na-achị ala-eze ndị nwụrụ anwụ. Ka oge na-aga, Horus, nwa Osiris, gbagwara nna ya: o gburu Set ma ghọọ Fero n'oge ya. N'akụkọ ihe atụ, e nwere ihe ndị mmadụ na-ekwu na ihe ndị ụkọchukwu maara. Echere m na onye na-agụ akwụkwọ m maara ihe iji kwubie na Osiris Myth bụ akwụkwọ ndị Sayensị Ijipt nke Universal Life nke ụwa, ụwa, na mmadụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ gaghị aghọta ihe ndị a. Geb na Nut na-anọchite anya ọnọdụ nke njedebe nke enweghị njedebe, nke Ebighị Ebi, Nke zuru ezu. Enweghị ike nwere akụkụ abụọ, enweghị ohere (ged) na nrụgide na-adịgide adịgide ma ọ bụ ume Chineke dị ọcha (nut). Anyị nwere ike ịkpọ Ged Primal Okwu Na-adịghị Eju na Nut Mmụọ Nsọ Dị Nsọ. Iji mee ka ụwa na ụwa dị iche iche, Mmụọ Nsọ ma ọ bụ Ged-Nout dị iche na ụgbọ elu kachasị elu na mbara ụgbọ elu. Mgbe omumu Osiris, Isis, Set, na Neeti na ndi no n'ime akwukwo ihe omimi di iche iche na ihe ndi ozo. N'ebe a ka enweghi uche, osisiri Osiris n'ime akụkụ 14 ma Isis nyere ya ndu. N'ebe a, anyị na-ahụ ike nke uche iji mee ka ihe niile dịrị ma na-edozi okwu (Isis) iji mee ihe ngosi a n'ime ihe niile iji kwe ka okwu nke mmụọ dị iche (Osiris). Seth bụ ikike na-ebibi ihe nke na-eme ka ihe niile dịrị (Isis anya) iji nwetaghachi. Seth bụ onye ọ bụla nke ojii ya, mbibi ndị a na ọnwụ, nke na-ekwe ka nlọghachi oge nile nke ụwa, ụwa na mmadụ. Horus bụ Monad Osaịris-Isis (Spirit-okwu) ruru site na evolushọn, mmadụ ogbo na ga consciously laghachi alaeze nna ya Osaịris (Chineke chi ibu). Na nke a site n'enyemaka nke amamihe (nke). Tụkwasị na nke ahụ, otu narị afọ atọ nke ndị Ijipt bụ Osiris-Horus-Isis na-eleghachi anya ịdị n'otu na-ume ike nke ndị ọkà mmụta sayensị nke oge a. Ngbagwoju anya bu ihe okike nke madu na ihe. Iji ghọọ ihe ọzọ, mgbagwoju anya ga-ekewa ma gbanwee n'ime ihe dị mfe dị mkpa maka ihe a na-atụ anya, mgbagwoju anya ọhụrụ. Anyị nwere ike iche echiche banyere uwe dịka ihe atụ, ya na agba ya, wdg. nke bụ ihe dị mfe niile, ma, n'ikpeazụ, na-aghọ ihe, ihe dị mgbagwoju anya. Nke ahụ bụ ihe okike. Nke a bụ ihe ndị na-emepụta ọgwụ na ndị na-edozi ahụ n'Ijipt oge ochie, nke ahụ bụkwa ihe sayensị na-eme taa.
Mgbe Chineke Thoth na-ekwu: "mepụta okpukpe (azụmahịa, ezinụlọ, mkpakọrịta)", ọ naghị agwa otu okwu. Ọ naghị agwa ndị mmadụ okwu. Ọ na-agwa onye ọ bụla n’ime anyị okwu n’otu n’otu. Tayou enweghị ike ikwu echiche sayensị nke ndị nkuzi ya n'ihi na ụlọ ha ezighi ezi, yabụ na-emegide echiche ya.
Ná mmechi, The New Project Pharaonic ekekpepde site Thoth-Hermes Trismegistus Institute e kere eke, Aims na-akwalite na onye ọ bụla African mba mkpa iṅomi (5) at a nyere ọnụ ọgụgụ, na nkà mmụta sayensị akụrụngwa, nkà na ụzụ, ego na ulo oru nke Germany. Nke a, ka a oru na isi, na nkà mmụta sayensị, nkà na ụzụ na ulo oru akụkụ nke Federal ma ọ bụ ibe Africa nwere ike iru zere agha ụlọ ọrụ na-arụ na mkpebi siri ike na mbara igwe. Oghere bụ ụkpụrụ dị mkpa nke pyramid ahụ. (6) (7) Space bụ ọdịnihu anyị. All ndị a obere pyramid anyị na-ahụ n'ebe nile na-efu dị iche iche na-abụghị anyị na Afrika, bu History World na-eme iji nọrọ ná nchebe na ịdị ukwuu nke Ancient Egypt. (8) N'ihi ya na-spokespersons nke Inertia na New African-emegide, ndị na-asị na anyị agaghị na idetuo Western sayensị. Ihe ngosi ndi ochichi nke ndi Afrika ohuru bu ihe omuma.
(1) N'ọchịchị ntuli aka ikpeazụ nke Chad, President Deby ga-erite uru site na nkwado nke òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị 111 na mkpakọrịta. Ihe ndị ga-eme ma ọ bụrụ na ọnọdụ a na Deby ga-enye aka mee ka ndị mmadụ nweta ọganihu nke ndị ọchịchị na Chad
(2) Na nleta mbụ ya na France, onyeisi oche Beninese, bụ Patrice Talom, gosipụtara mkpa ọ dị na Paris iji kwadebe obodo ya na ụlọ ọrụ ọ chọrọ. Ndị iro ya na-ekwu na n'enweghị enyemaka nke Paris, ọrụ Beninese nwere ike ịbanye n'ụwa nke nkà ka Benin chọrọ maka ọganihu
(3) The mmasị nke na-achị achị ndị mmadụ na nke European ụdị, o yiri ka isi na-akpata na ndọrọ ndọrọ ọchịchị jụrụ ịkwa endogenous entrepreneurial uzo ozo ke uwa ulo oru mpi. Ihe a na-adọrọ mmasị na Angola bụ nke a hụrụ nke ọma, ebe ọ bụ na ya na otu onye na-ama aka na asọmpi, ọ bụ onye na-azụ ahịa Portuguese. Right ugbu a, anyị na-edebe ihe na Angolan ndinyom bourgeois klas ọgụ na mgba na-na di na nwunye na European ụdị na ndị ọzọ nile na-enweghị ọrụ na-eto eto Angolans, ọbụna na-elekọta mmadụ na klas. O yiri ka m na-ebibi nke Black Work ka Nature, bụ na mkpụrụ ndụ ihe nketa nke na-achị elites na Africa. Ọ bụrụ na anyị na-etinye eziokwu ndị a yiri na Ancient Egypt mgbe ndị na-ewu nke Sphinx na pyramid, anyị na-edebe na otu mmasị maka ndị anyị na-akpọ ọzọ emechaa Europe, agawo ọkụ miscegenation na Egypt. Nmehie a, n'aka nke ya, mere ka ọrụ Grik na-arụ ọrụ. Ọchịchị a mere ka ndị Rom si na ya pụta, na-esochi n'ọbá akwụkwọ nke Aleksandria na ịkwakọrọ ihe ndị dị nsọ na nke anwansi n'ụlọ arụsị ndị Ijipt. Ma eleghị anya, ọganihu dị ukwuu nke ndị Farisii mgbe ha rụchara ọrụ ya, na-achọrịrị ndị na-anọchi anya ha. Nke a abụghị ụdị taa. Otu nwere echiche na Africa bụ onye nzuzu na onye rụrụ arụ ma katọọ onwe ya.
(5) “Dị nnọọ ka ọha mmadụ nke oge a na-emegide ncheta nke oge ochie na usoro ọ bụla, dịka ndị na-ede uri anyị coomiri Homer na Virgil, Sophocles na Euripides, Plautus na Terence, dị ka ndị ọkà ihe ọmụma anyị si n’aka ndị Socrates, nke Pythagoras, Plato na Aristotle, nke ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme na-ewere Livy, Sallust ma ọ bụ Tacitus maka ụdị, ndị na-ekwu okwu anyị, Demosthenes ma ọ bụ Cicero; na ndị dọkịta anyị ka na-amụ Hippocrates, na koodu anyị na-asụgharị Justinian. N'otu aka ahụ, oge ochie nwekwara oge ochie nke ọ mụtara, e ,omi ma depụtaghachi. Kedu ihe nwere ike ịdị mfe ma bụrụ ihe ezi uche dị na ya karị? Ọ bụghị ndị niile si n’etiti ibe ha. Ihe omuma a nke mba meriri n’enwe oke oke n’ókèala ya, ma nwua n’ogugu nke nwetara ya? »Jacolliot, na The Bible in India nke e hotara na Isis ekpughere
(6) “Ọ nọchiri anya ụkpụrụ okike, na na ọ bụkwa ihe atụ maka ụkpụrụ nke jiometrị, mgbakọ na mwepụ, ịgụ kpakpando, na mbara igwe. N’ime ya ọ bụ nnukwu ụlọ-nsọ, nke mgbagha ya gbara ọchịchịrị ka ihe omimi nile mezuru, nke mgbidi ya na-ahụkarị mmemme nnabata nke ndị otu ezinụlọ eze. Akwụkwọ sarcophagus porphyry nke Prọfesọ Piazzi Smyth, Astronomer Royal nke Scotland, na-agbadata na obere ọrụ nke igbe ọka, bụ mpempe akwụkwọ baptism, site na, mgbe ọ na-apụ, neophyte ahụ "amụrụ ọzọ" wee bụrụ onye na-eso ụzọ. ". (Ekpughere Isis)
(7) “Otu n’ime Akwụkwọ nke Hamis na-akọwa ụfọdụ pyramid ndị a, dịka ịrị elu n’ikpere mmiri,“ ebili mmiri ya na-emebi oke iwe ha na ntọala ha ”. Nke a na-egosi na agbanweela atụmatụ mpaghara nke mpaghara ahụ, ọ nwere ike igosi na anyị ga-ekwenye na "granaries" oge ochie a, "ndị na-ahụ maka mbara igwe", na "ili ndị eze", Mmalite tupu e guzobe Sahara na site n'ọzara ndị ọzọ. Nke a ga - apụta oge ochie dị elu karịa puku afọ ole na ole, nke ndị Egyptologists ji mmesapụ aka nye ”. (Ekpughere Isis)
(8) “Ebe Ophic na heliolet siri malite, ọdịdị nke ihe ncheta na ihe ncheta, ga-alaghachi na Hamis Trismegistus nke Egypt. Ebee ka anyị kwesịrị ịchọ ozi a ma ọ bụrụ na ọ bụghị na akwụkwọ Hermetic? O yikarịrị ka ndị edemede nke oge a hà maara ihe, ma ọ bụ ọbụna karịa, banyere akụkọ ifo na òtù nzuzo oge ochie karịa ndị kụziiri ha ndị ha na ha dịkọrọ ndụ? O doro anya, ihe abụọ dị mkpa: nke mbụ, ọ bụ ịchọta Akwụkwọ nke Hermes nke na-efu; na nke abụọ nwere igodo iji ghọta ha, n'ihi na ịgụpụghị ya. N’adabaghị nke a, ndị sayensị anyị agbadala n’ịkọ nkọ n’enweghị isi, dịka, n’otu ihe kpatara ya, ndị na-amụ banyere mbara ala na-alasị oge ha n’efu n’ịchọpụta ụzọ mmiri Naịl. N'ikwu eziokwu, Egypt bụ ebe mgbaba nke ihe omimi. Na-enweghị ịkwụsị ịtụle ma Hermès ọ bụ "Onye isi nke anwansi ahụ mgbe ide mmiri gachara", dị ka Des Mousseaux kpọrọ ya, ma ọ bụ ụkpụrụ nke antediluvian anwansi, nke yiri ka o yikarịrị, otu ihe doro anya: ọ bụ eziokwu, izi ezi na ịba uru nke Akwụkwọ nke Hamis - ma ọ bụ karịa ihe fọdụrụ n'ime akwụkwọ iri anọ na abụọ ahụ sitere n'aka onye anwansi Ijipt, bụ nke Champollion mara nke ọma na nke Champollion-Figéac na-ezo aka na ha. »(HP Blavatsky, na Isis ekpughere).
Akụkọ banyere emesapụ aka na United States, site n'aka Louis Hartz. New Horizons, onye nkwusa.
Barry Goldwater: Nnwere Onwe bụ Onye Ntugharị Mgbapụta Ya: Stephen Shadegg
The Basic Doctrine, site na HP Blavatsky
Ụzọ abụọ nke counter-revolution, Lenin
Stevia dị ka ihe ọzọ na sugar maka ndị ọrịa mamịrị
Na-ege ntị na mkpọtụ gị - Sonia Choquette (Audio)